၅ ကြည့်ရှုရန်ဒီဂျစ်တယ်ပုံနှိပ်ဥပမာများ Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, စက်တင်ဘာလ 19, 2012 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်နဲ့စမ်းသပ်နေတယ်၊ Zmags, အချို့ဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏ကြည့်ရှုသူများအတွက်အရမ်းအေးတယ်။ ငါဥပမာအချို့ကိုပြချင်တယ်၊ ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကမယုံနိုင်လောက်အောင်အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်တဲ့ဒီဂျစ်တယ် application တွေဖြစ်တယ်။ ကြည့်ရှုသူကိုဖွင့်ရန်ကြည့်သူ၏မြင်ကွင်းပုံကိုသာနှိပ်ပါ။
Zmags Commerce Pro ထုတ်ကုန်၏သုံးစွဲသူများသည်a5x တိုး စာမျက်နှာအမြင်များတွင်2ဆအချိန်ကုန်ဆုံး site ပေါ်တွင်တစ် ဦး မှတက် ကူးပြောင်းနှုန်းထားများအတွက် 2x ဓာတ်လှေကား နှင့်တစ်ဦး ပျှမ်းမျှအမိန့်တန်ဖိုး 55% တိုး!
CVS Caremark - ဗွီဒီယို၊ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောစာမျက်နှာများ၊
အထုပ်အတွင်းပိုင်း - လက်ျာဘက်၌ယခင်ထုတ်ဝေမှုများအားလုံးပါရှိသည်။
ဒီနေ့အာဟာရနှင့်အာဟာရ - DMA Digital Magazine Awards တွင်အနိုင်ရသူသည်ဤအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောဒီဂျစ်တယ်မဂ္ဂဇင်းသည်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောကြော်ငြာများနှင့် embedded ဗီဒီယိုများဖြင့်ကြည့်ရမည်။
ဆဲလ်ကို C မဂ္ဂဇင်း - ဒစ်ဂျစ်တယ်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောကြော်ငြာများကိုအလွန်ထူးခြားစွာအသုံးပြုခြင်း။ စာမျက်နှာ ၁၀ ရှိ Just for Boys, Just for Girls ရွေးစရာကိုကြည့်ပါ။
အချို့လက်လီရောင်းချသူများကဒီဂျစ်တယ်ထုတ်ဝေမှုကို၎င်းတို့၏ site တွင်တိုက်ရိုက်အသုံးပြုကြသည်။ Dick ၏အားကစားကုန်ပစ္စည်းများ၏ Lookbook ကိုကြည့်ပါ။ သူတို့၏အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးစနစ်နှင့်အပြည့်အ ၀ ပေါင်းစပ်ပြီးကြည့်ရှုသူသည်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသည့်မြင်ကွင်းများကိုပြသသည်။ + သင်္ကေတကိုနှိပ်ပါ။ ၎င်းကိုသင်တိုက်ရိုက်ထည့်နိုင်သည် မင်းရဲ့စျေးဝယ်လှည်း!
Zmags ၏နောက်ထပ်ထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခုမှာသင်သည်သင်၏ Google Analytics UA ကုဒ်ကို embed လုပ်ပြီးသင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ဝေမှု၏အသုံးပြုမှုနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုတိုင်းတာနိုင်သည်။